Nri Dukan - nke na-arụ ọrụ, chọpụta ihe nzuzo! | Nutri Nri
Ihe oriri Dukan
Ọ bụ obere onye ahụ na-anwalebeghị ụfọdụ ụdị nri ma ọ bụ ị nọ na nri n'oge ndụ gị niile. Taa enwere otutu nri di iche iche di iche iche na ekwe nkwa ida otu kilo na oge ndekọ. N'ime afọ ole na ole ọ dịla ejiji na Dukan nri, atụmatụ ọnwụ ọnwụ nke nwetaworo otuto n'ụwa na nke ahụ na-atụ aro ifelata n'ụzọ zuru oke.
Nri Dukan mejupụtara 4 usoro nke ahụ ga-enyere onye ahụ aka ịta ahụ nke ukwuu ngwa ngwa na nhazi. Ọ bụrụ na ịchọrọ ịmatakwu banyere ụdị nri a, echefula nkọwa zuru oke ma mara nke ọma njirimara ya na ihe ize ndụ ndị dị na ya nke ahụ nwere ike iduga ahụike.
1 Kedu nri Dukan?
2 Usoro nke nri Dukan
3 Ize ndụ nke nri Dukan
Kedu nri Dukan?
La Dukan nri bụ protin nri na-achọ oriri nke ndi na-edozi na nri kwa ụbọchị ma na-ezere mgbe niile oriri nke kabohaidret. Na nke a, ahụ nwere ike iri abụba na-agbakọta n'ime ma si otú a tufuo ibu na a ngwa ngwa na mfe. N'ime usoro ụzọ abụọ mbụ nke nri a, kilo set mgbe n'ime oge abụọ gara aga, a na-echekwa ibu ahụ enwetara, na-egbochi ihe a na-akpọ rebound mmetụta.
Usoro nke nri Dukan
Oge mmegide: Nke a agba nke mbụ Ihe ejiri mara ya bụ mgbanwe na metabolism onwe ya na ọnwụ nke kilo bụkwarị okenye. Oge nke oge a dabere na ego kilo nke onye chọrọ ịla n'iyi. O nwere ike ịdịru site n’otu ụbọchị ruo n’iru otu izu. Na nke a, ọ bụ naanị oriri nke ihe oriri bara ụba protein anụmanụ dị ka ọkụkọ na-enweghị akpụkpọ anụ, àkwá, azụ ma ọ bụ anụ uhie. Enwere ike iri nri ndị a n’enweghị oke njedebe ma onye ahụ nweere onwe ya ịhọrọ ọnụọgụ ya. N'aka nke ọzọ, a machibidoro nri dị mkpa dị ka mkpụrụ osisi iwu, inine, osikapa ma ọ bụ ọka.
Irughari mmiri: Na nke a, nri ọhụrụ ka nri a ya mere o kariri nke oma. Tinyere ndị na-edozi ahụ ị ga-ewererịrị akwụkwọ nri na-enweghị oke. Nke a na-emekarị na-adịgide adịgide banyere ọnwa abụọ nke bụ oge oge gafere ruo mgbe onye ahụ jisiri ike ruo na nke ha ezigbo ibu. N'oge a, ụfọdụ nri dị ka osikapa, poteto ma ọ bụ mkpo.
Oge nkwado: Na nke a oge na-atụ ụjọ mgbe niile nke na-eme n'ọtụtụ nri a na-akpọ nri ọrụ ebube. N'oge nke a, nnabata nke nri ụfọdụ bara ọgaranya kabohaidret. Ọ na-adịkarị dịka kilo nke onye ahụ a jụrụ ajụ tufuru, ọ kachasị kilogram furu efu na-aba ụba site na iri wee nweta ya n'ụzọ a ụbọchị ọ na-adịgide nke atọ a. Na nkwado, ị gaghịzi ebu ibu kama ọ na-eme ihe enwetara na uzo abuo abuo gara aga. Nwere ike iri nri ndị amachiburu dịka mkpụrụ osisi, osikapa, cheese ma ọ bụ achịcha.
Oge nkwụsị: Nke a bụ nke ikpeazụ nke esemokwu ahụ Dukan nri na n’ime ya, onye ahụ eruworị ndị ezigbo ibu a ga-edobe ya otu ụbọchị n’izu. N'ụbọchị ahụ, ị ​​ga-eri protein naanị iji kwụọ ụgwọ maka ị theụbiga mmanya ókè na ụbọchị ndị ọzọ nke izu. Ọ ga-adị mma ịgbaso usoro a n'oge ike nke ndụ ma n'ụzọ dị otú a jigide ezigbo ibu ma zere mmụba nke kilo.
Ọ dị mkpa ka ị cheta na maka nri ka ị bụrụ 100% dị irè, ị ga-ewere ole na ole Iko mmiri 12 kwa ụbọchị na tablespoon nke oat bran. Enwere ike iwere ngaji a na yogọt ma ọ bụ akwa.
Ize ndụ nke nri Dukan
La Dukan nri Obi abụọ adịghị ya na nri a ma ama taa na ọtụtụ ndị kpebiri ịgbaso ya. Agbanyeghị, n'agbanyeghị ihe ọtụtụ mmadụ na-ekwu, ọtụtụ ndị ọkachamara n'ihe banyere nri kwetara na ọ bụ eziokwu nri dị oke egwu gaa ahụike. Dị ka ọ bụ nri ha na-ebu ụzọ ndi na-edozi na nke a na-ewepu ọtụtụ nri dị mkpa maka ahụ, ọ nwere ike ibute nnukwu nsogbu ma digestive na metabolic larịị.
Ke akpa nkebi nke a nri, oriri nke kabohaidret, enweghị carbohydrates a na-emepụta a ọnwụ ọnwụ mana enwekwara mgbaàmà ndị ọzọ na-akpata n'ihi enweghị ike dịka ike ọgwụgwụ, ike ọgwụgwụ ma ọ bụ isi ọwụwa. Ihe ize ndụ ọzọ dị na nri dị otú ahụ bụ na ha na-etolite nkume uric acid nke nwere ike ibute ihe a na-akpọ nkume akụrụ. Nri Dukan makwaara maka ịkpata njọ nsogbu afọ ntachi n'etiti ụfọdụ ndị n'ihi enweghị eriri na nri n'onwe ya. Iji merie nsogbu a, atụmatụ a na-amanye gị ka ị were a tablespoon nke akpọrepu otis maka oge nri a kwuru.
Dị ka ị hụworo, enwere ọtụtụ uru na Dukan nri Mana dị ka ọ dị n'ọtụtụ nri nri ebube, enwerekwa ọtụtụ ihe egwu n'ụdị atụmatụ ibu ibu a. Na ihe omume na ị kpebiri iso ụdị nri a ga-efunahụ gị ole na ole mmezi kilos, ihe kachasị mma bụ ịgakwuru ọkachamara ga-adụ gị ọdụ ma ọ bụrụ na ọ bara uru ịgbaso ụdị nri a. Echere m na m ekpochapụla gị obi abụọ niile banyere nri Dukan a ma ama ma họrọ ụzọ kachasị mma.
Mgbe ahụ, m ga-ahapụ gị ihe nkọwa video nke mere na o doro anya karịa ihe nri Dukan mejupụtara yana ihe ọma na ọghọm ya.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Nutri Nri » Nkwere maka enyemaka » Ihe oriri Dukan
Nsonaazụ ihi ụra nke ukwuu
Ndụmọdụ iji rie obere